Erayaduhu xoog bay leeyihiin, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Ma xasuusan karo magaca filimka. Ma xasuusan karo sheekada sheekada ama magacyada jilayaasha. Laakiin waxaan xasuustaa hal goob oo gaar ah. Halyeeygu wuxuu ka baxsaday xero dagaal oo maxaabiis ah, askar aad u raacdayna waxay u carareen tuulo u dhow.
Markii uu aad u baadi goobayay meel uu ku dhuunto, ugu dambeynti wuxuu galay masraxa dadku ku badan yahay wuxuuna ka helay meel. Laakiin ugu dhakhsaha badan wuxuu ogaaday in afar ama shan waardiye xabsi galeen masraxa oo ay bilaabeen inay xayiraan jidadka. Fikradihiisu way tartamayeen. Muxuu sameyn karaa? Ma jirin meel kale oo loo maro wuxuuna ogaa in si fudud loo aqoonsan doono haddii booqdayaashu ka baxaan tiyaatarka. Isla markiiba fikir ayaa u yimid isaga. Waxay ku booday masraxa nus-madow oo qaylisay: «Naarta! Dabka! Dabka! » Dadkii waxay argagaxeen oo degdeg u galeen jidadkii laga soo dejiyey. Halyeeygu wuxuu fursaddaa qaatay, oo uu la dhexgalay dadkii badnaa, ayuu ka leexday waardiyayaashii, oo habeenkii wuu lumay. Waxaan ku xasuustaa muuqaalkan hal sabab oo muhiim ah: Erayaduhu xoog bay leeyihiin. Dhacdadan layaabka leh, eray yar ayaa dad badani cabsi gelisay oo naftooda u cararay!
Buugga Maahmaahyada (18,21:2) waxay ina baraysaa in ereyadu awood u leeyihiin inay nolosha keenaan ama dhintaan. Erayo si qaldan loo xushay ayaa dhaawici kara, dila kara xamaasada oo dadka dib u celin kara. Erayada si wanaagsan loo soo doortay ayaa bogsiin kara, dhiirigelin kara oo bixin kara rajo. Intii lagu jiray maalmihii madoobaa ee Dagaalkii Labaad ee Dunida, Winston Churchill ereyadiisii ​​si hufan loo soo xushay oo si qurux badan loo akhriyay ayaa dadka siisay geesinimo waxayna soo celisay adkaysigii dadka Ingriiska ee hareereeyay. Waxaa la sheegaa inuu abaabulay luuqada Ingriisiga una diray dagaal. Taasi waa sida awoodda ereyada awood u leedahay. Waad beddeli kartaa nolosha.
Tani waa inay naga dhigtaa mid aamusnaan oo aan ka fikirno. Hadday ereyadayada bini aadamku leeyihiin awood badan, intee in ka badan ayuu ereyga Ilaah? Warqadda ay u dirtay Cibraaniyada waxay ina tusaysaa in "ereyga Ilaah yahay mid nool oo xoog leh" (Cibraaniyada 4,12). Waxay leedahay tayo firfircoon. Waxay leedahay tamar. Waxay ka dhigeysaa waxyaabo dhaca. Waxay sameysaa waxyaabo uusan qof kale sameyn karin. Kaliya uma wargaliyo, waxyaabo ayey qabataa. Markii Ciise shaydaan ku jirrabay cidlada dhexdeeda, wuxuu kaliya doortay hub uu kula dagaallamo oo ka fogeeyo shaydaanka: “Waa qoran tahay; waa qoran tahay; waa qoran tahay, »Ciise ayaa ku jawaabay - Shayddaanna waa cararay! Shayddaanka waa xoog badan yahay, laakiin Qorniinku xitaa wuu sii xoog badan yahay.
Laakiin ereyga Eebbe ma aha oo keliya wax qabadkiisa, isaguna wuu beddelaa. Kitaabka Quduuska ah looma qorin macluumaadkeena, laakiin waa isbadalkeena. Maqaallada wararka ayaa noo sheegi kara. Novels ayaa na dhiirrigelin kara. Gabayada ayaa nagu farxi kara. Laakiin erayga Ilaah ee awoodda leh oo keliya ayaa beddeli kara. Marka la helo, ereyga Ilaah wuxuu bilaabaa inuu inagu dhex shaqeeyo oo uu noqdo awood nololeed nolosheena. Dhaqankeenna ayaa bilaabay inuu isbeddelo oo aan midho dhaleyno (2 Timoteyos 3,15:17 - 1; 2,2 Butros). Ereyga Eebbe wuxuu leeyahay awood noocan oo kale ah.
Ma la yaabanahay? Ma aha marka aan ka akhrino 2 Timoteyos 3,16: "Waayo, Qorniin kastaa wuxuu ku yimid Ilaah", (“Eebbe ku neefsaday” waa tarjumaadda saxda ah ee Giriigga). Ereyadan kaliya maahan ereyo bini aadam. Iyagu waa asal rabaani ah. Waa ereyo isku ilaahay abuuray oo aduunyada abuuray oo wax walba ku helay eraygiisa xooggiisa (Cibraaniyada 11,3; 1,3). Laakiin keligiis nagama tagno eraygiisa inta uu baxayo wax kale. Ereygiisu waa nool yahay!
"Sidii geed ruxruxan oo xardhay kun duud ah, ereyga Ilaah wuxuu ku yaal bogagga Qorniinka oo ah sidii iniin yar oo hurda oo Silo uun sugaysa inuu soo dhoweeyo » (Shakhsiga Masiixa ee Masiixa: Daraasad uu sameeyay Cibraaniyada oo uu qoray Charles Swindol, p. 73).
Isagu weli wuxuu ku hadlaa ereyga lagu hadlay
Marka ha khaldin akhrinta Kitaabka Quduuska ah sababta oo ah inaad qasab ku tahay ama inay tahay waxa saxda ah ee la sameeyo. Ha ugu akhrin hab farsamo ahaan. Xitaa ha aqrin sababtoo ah waxay rumeysan yihiin inuu yahay Erayga Eebbe. Bedelkeeda, u arag Kitaabka Quduuska ah Ereyga Eebbe oo uu maanta iyaga kula hadlo. Si kale haddii loo dhigo, wuxuu wali ka hadlayaa wuxuu yidhi. Sideen ugu diyaarin karnaa qalbiyadeena midho dhal si aan u helno ereygeeda xoogga badan?
Iyada oo loo marayo barashada Kitaabka Quduuska ah, dabcan. Ishacyaah 55,11 wuxuu leeyahay: "Oo kanu waa eraygii afkayga ka soo baxa, inay ahaato siduu ahaan lahaa, Oo dib iigu noqon maayo madhan, laakiin waxay samayn doontaa waxaan jeclahay oo wuu ku guuleysan doonaa wixii aan u diro . » John Stott wuxuu sheegayaa sheekada nin wacdiya oo warwareegaya isagoo dhex maraya albaabka amniga ee garoonka diyaaradaha. Tani waxay ka horysay iskaanka elektiroonigga ah oo waardiyaha ammaankuna jeebkiisa ka buuxsamayay. Wuxuu soo helay sanduuq baakad madow ah oo ay kujiraan Kitaabka Quduuska ah wacdiyaha oo aad u doonayay inuu ogaado waxa ku jira. "Waa maxay sanduuqani?" wuxuu si shaki leh u weydiyay wuxuuna helay jawaabta naxdinta leh: "Dynamite!" (Inta u dhaxaysa Laba Caalamka: John Stott)
Waa maxay tilmaanta habboon ee Erayga Eebbe - xoog, iyo wax qarxin kara - oo "qarxin kara" caadooyinka duugoobay, jebin kara rumeynta beenta ah, qarin kara cibaadada cusub oo sii deyn kara tamar ku filan si aan u bogsiino nolosheena. Sow taasi sabab macquul ah ma aha in la akhriyo Kitaabka Quduuska ah in la beddelo?